pearl shining shampoo
၂၈-၁၂-၂၀၁၆ မှ ၂၉-၀၁-၂၀၁၇ ထိ
Ye lin Htike Trading Co., Ltd. ၏ ဆိုင်လိပ်စာ
No(1),Pyi Taw Aye Street,Bauk Htaw ,Yangon
Showroom Address:35 Damadarna street , corner of ThamainBayan main Road (near Tarmwae Shwe Baho Hospial)
Facebook Page : https://www.facebook.com/Mise-en-Scene-Myanmar
mise en scène ၏ အမှာစကား
အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါ။ Ye Lin Htike Trading Co., Ltd. မှ ဖြစ်ပါတယ်။
ကံထူးရှင်တစ်ယောက်အတွက် ကိုရီးယားနိုင်ငံထုတ် mise en scène တံဆိပ်ဖြစ်သော Pearl Shinning Nutri and Gloss Series (Deep Repair) Series မှ Shampoo အား မဲဖောက်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၄င်း Shinning Nutri and Gloss Series သည် ဆံသားများအား နက်နဲစွာ ပြန်လည် အားဖြည့်ပေးပါသည်။ အလွန်တရာ ခြောက်သွေ့သော ဆံသားများ၊ ဆံပင်ဖြူ မြန်စေသော ဆံသားများအား ပြုပြင် ထိန်းသိမ်း ပေးရုံ သာမက ဦးရေပြားတွင် ရှိသော ဆဲလ်များအား အသစ်တစ်ဖန် ပြန်လည် ပြုပြင်ပေး ပါသည်။ Pearl မှ ထုတ်ယူထားသော Hydrated Oyster Protein ဖြင့် ဆဲလ်သားများအား ထိရောက်စွာ ပြုပြင်ပေး ပါသည်။ ဆံပင်ဖြူခြင်းကို ကာကွယ် ပေးသော Anti-Aging Fatty Acid, Omega3နှင့် Omega5တို့ ပေါင်းစည်း မှုကြောင့် ဦးရေအား ဘောက် ကင်းဝေးစေပြီး Omega6နှင့် အသီးအနှံတို့ကြောင့် ဆံသားကို ချောမွတ် တောက်ပြောင် စေပါသည်။
၀င်ရောက် ကံစမ်းသော မိတ်ဆွေများအား mise en scène show room မှ နွေးထွေးစွာ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ mise en scène ထုတ်ကုန်များအား မြန်မာပြည် တစ်ဦးတည်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် Ye Lin Htike Trading Co., Ltd. မှ ဖြန့်ဖြူး ရောင်းချ ပေးနေပါသည်။
mise en scène ၏ ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ
Scalp Care Shampoo သည် ဦးရေပြားကို အေးမြ သန့် ရှင်း စေပါသည်။
အာဖရိကမှကြာပန်း၊ ဂျင်းနှင့် ၀ါးဦး ရည်ပါ ရှိသော ကြောင့် ဦး ရေပြားအား အသစ်တဖန် အေးမြသန့်ရှင်းစေပါသည်။
African Lotus, Ginger, Bamboo ပါဝင်မှု့ကြောင့် ဦးရေ ပြားကို အေးမြသန့်ရှင်းစေကာ ဆံပင်အရင်းမှ အဖျားအထိ ရေဓာတ်ထိန်းပေးခြင်း၊
ဦးရေပြားအား (၇) နာရီဲကြာသည်အထိ သန့်ရှင်း အေး မြ စေခြင်း၊ဘောက်ထခြင်းမှကင်းဝေးစေခြင်း၊ စသော အကျိုး ကျေးဇူးများ ရရှိစေမည် ဖြစ်ပါသည်။
Cool Care Shampoo
Cooling Care Shampoo သည်အလွယ်တကူ အဆီပြန်တက်သော ဆံသားများအတွက် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Menthol,Camphor,Marine Fiber,Pepper Mint,Deep Cleasing effects သည်ဦးရေပြားကို အေးမြသန့်ရှင်းကာ ဆံပင်အရင်းမှအဖျားအထိ သန့်ရှင်းအေးမြစေပြီး ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ဆံကေသာ ပိုင်ဆိုင်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Perfect Repair Series သည် ဆံသားခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေသူများအတွက် အဓိက ထား ထုတ် လုပ်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆံကေသာအတွက် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သော အဆီ (၇) မျိုး ဖြစ်သော (Argan, Camelia,Coconut, Apricot, Marula,Jojoba,Oilve Oils) များဖြင့် ထုတ်လုပ်ထားခြင်းကြောင့် ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေသော ဆံသားများအား ပြုပြင်ပေးပြီး ပျော့ပျောင်းနူးညံ့တောက်ပသော ဆံကေသာများအဖြစ် ပြောင်းလဲပေးပါသည်။
အဆီ (၇) မျိုး၊ ဆံသားအတွင်းထဲထိအာဟာရပေးသော အဆီများ ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆေးဆိုးခြင်း၊ ဖြောင့်ခြင်း၊ ကောက်ခြင်းကြောင့် ပျက်စီးနေသော ဆံပင်များကို အရင်းမှ အဖျားအထိထိထိရောက်ရောက် ပြုပြင်ပေးပြီး ဆံကေသာများကို နုးညံ့တောက်ပအောင်စွမ်းဆောင်ပေးယုံသာမက ဆံပင်နှစ်ခွဖြစ်ခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Perfect Repair Treatment
Anti-aging Series သည် Antioxidant Nutri-Collagen ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဦးရေပြား၏ အတွင်းပြင်သာမက ဆံသားအရင်းကဖျားထိ နက်မှေင်ထူထဲတောက်ပစေပါသည်။ဆံပင်အမြန်ဖြူခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Nutri-Collagen ၏အကျိုးကျေးဇူးများမှာ ဆံသားကို တနေကုန်တောက်ပစေပါသည်။
Collagen နှင Super Berry ပါဝင်သောကြောင့် ဆံသားအရင်းမှ အဖျားထိ ပုံကျလှပစေပါသည်။
Fiber Berry Extract များပါဝင်သောကြောင့် ဆံသားအရင်းမှ အဖျားထိ ကောင်းမွန်စေပါသည်။
Fiber Protein Collagen ပါဝင်သောကြောင့် ဆံသားများပိုင်ဆိုင်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
Soap Berry Extract ပါဝင်ခြင်းကြောင့် ဆံသားများ ဖွာခြင်းမရှိပဲ ဆံနွယ်များ ပြောင်လက် တောက်ပ စေပါသည်။
Anti-aging Volume mist
Damage Care Hair Series
Damage Care Hair Series မှာ ဆံသားနှစ်ခွ ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးကာ ပျော့ပျောင်း နူးညံ့စေပါသည်။ ကြေမွပျက်စီးနေသော ဆံကေသာများနှင့် အလွယ်တကူ ကျိုးပြတ်လွယ်သောဆံကေသာ များအတွက် အထုး ထုတ်လုပ်ထားပါတယ်။
ပျက်စီးနေသော ဆံကေသာအား Argan Oil ကြောင့် ချောမွေ့ပျော့ပျောင်းတောက်ပြောင်စေပါသည်။ Royal Jelly ပါဝင်သောကြောင့် ဆံသားအားပိုမိုသန်စွမ်းစေပြီး ပျော့ပျောင်းနူးညံ့စေပါသည်။
Rose Water ပါဝင်မှုကြောင့် ဦးရေပြား ခြောက်သွေ့ခြင်း၊ (PH) level ကိုညှိပေးသောကြောင့် ဆံသားပျက်စီးမှုအား လျော့ကျစေပါသည်။ဘောက်ထခြင်းမှလည်း ကာကွယ်ပေးပါသည်။
နောက်ထူးခြားမှု တစ်ခုမှာ Permrates Serum ပါရှိသောကြောင့် ပျက်စီးနေသော ဆံကေသာပေါ်သုတ်လိမ်းရာတွင် စေးကပ်မှု့မရှိပဲ ကျန်းမာသန်စွမ်းသော ဆံကေသာအား ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါသည်။
2in1 Oil Mist
Damage Care Heat Pack
Shine Care Series
Shine Care Series ကို ဆံပင်အရာင်ဆိုးသူများ အတွက် အဓိကထား ထုတ်လုပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ပျက်စီးနေသော ဆံကေသာအား Argan Oil ကြောင့် ချောမွေ့ပျော့ပျောင်းတောက်ပြောင်စေပါသည်။ Royal Jelly ပါဝင်သောကြောင့် ဆံသားအားပိုမိုသန်စွမ်းစေပြီး ပျော့ပျောင်းနူးညံ့စေပါသည်။
Diamond Power ပါဝင်ခြင်းကြောင့်ဆံသားအားကြေမွပျက်စီးခြင်းမရှိစေဘဲသာမန် Mist များထက်တောက် ပြောင် ချော့မွေ့စေပါသည်။
Shine Care Shampoo
Shine Care Treatment
Pearl Shining Curl and Volume Series
Pearl Shining Curl and Volume Series သည်ဆံပင်ကောက်သားကြာရှည်ခံပြီး ပုံသွင်းရန်လွယ်ကူစေရန် အဓိကထားပြီးထုတ်လုက်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Pearl Protection (Hydrolyzed protein oysters) ပါဝင်ခြင်းကြောင့် တောက်ပနက်မှောင်သော ဆံ နွယ်ကို ပိုင်ဆိုင်စေပါသည်။
Caviar Vitamins from Marine Fish ၏အကျိုးဖြင့် ဆံသားအာဟာရ ဖြည့်သွင်းပေးပြီး ပြန်လည်ရှင်သန် ရှည်လျားစေပါသည်။
Hair Spray/ Hair Therapy/ Style Care (Fresh Floral)
Style Care Fresh Floral Hair Spray သည်ပန်းများဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသောကြောင့် Spray ဖြန်းလိုက်သော အခါတွငိ ဆံသားအား ပန်းနံ့များ သင်းပျံ့စေပြီး ဆံသားအား ၈၀% လိုသလို ပုံသွင်းနိုင်ရုံသာမက စေးကပ် ခြင်းကရှိပဲ ၁၂ နာရီကြာလိုသလို ပုံသွင်းနိုင်ပြီး ဆံသားပျက်စီးမှုကို ကာကွယ်ပေးပါသည်။
Living Wave Curling Essence
Curling Essence (Bold Curl) ပေါ့ပါးပြီး စွဲလမ်းမက်မောစရာ ကောင်း သော ကောက်ကြောင်းများကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်း၊ နက်မှောင်ချော မွေ့ တောက်ပသော ဆံသားများကို ငါးရက်ကြာ ရရှိစေနိုင်ခြင်း နှင့် သဘာဝမှ ထုတ်လုပ်ထားသော ဆီများပါဝင်သောကြောင့် ဆံသား၏ အထဲအထိ လိုအပ်သော အာဟာရများ ဖြည့်တင်းပေးပြီး ဆံသားပေါ်မူတည် ကာ လှပသော ကောက်ကြောင်းကောက်သားများကို ဖန်တီးပေးနိုင်သော Essence ဖြစ်ပါသည်။
Moist and elasticity hair!
Cool and natural wave curl!
Provide shinny and smooth hair for five days!
Living Wave Quick Dry Mist
Living Wave Curling Series သည် ဆံသားကို တစ်ခါတည်းဖြင့် ပုံကျအောင် ပုံသွင်းပေးနိုင်ခြင်း၊ သဘာဝအဆီများပါဝင်သောကြောင့် ဆံသားအား လှပသော ကောက်သား ကောက်ကြောင်းများ ဖန်တီး ပေးနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။
Protect from heat damage hair !
Provides hair shine !
Living wave curl styling !
mise en scène ၏အကြောင်း
mise en scène (2014 Cosmo Beauty Award ပိုင်ရှင်)
mise en scène Branding သည် Compopolitian Group မှကြီးမှုးကျင်းပသော တစ်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ဂုဏ်ပြုဆုရရှိခဲ့သော Brand ဖြစ်ပါသည်။ Beauty Award အတွက် သုသေသန နည်းလမ်းများဖြင့် စီစစ်ရွေးချယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ Beauty Award အတွက် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်း နမူနာ 10,000 ကျော်ကို Survey ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး တိကျသေချာသော သုတေသနများကို ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမှ Cosmo Beauty Award ဆုရရှိလာသော Brand ဖြစ်ပါသည်။